जिल्ला बस्नेलाई छान्ने कि सहर पस्नेलाई :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
जिल्ला बस्नेलाई छान्ने कि सहर पस्नेलाई
पूर्वी पहाडी जिल्लामा संघ र प्रदेशमा पनि कांग्रेस–एमाले नै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भएपछि जिल्ला जिल्लामा चुनावी चहलपहल बढेको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकमा देखापरेको गतिरोधले २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको थियो । तीन चरणमा भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सोचेभन्दा शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप प्रशासनिक संरचनाहरूको गठन भइसकेको छ । नेपालीहरूका दुई ठूला चाड दशंै र तिहारको रमझमले भन्दा राजनीतिक पर्वले आमनेपालीको मन जितेको छ । विगतमा दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेका पूर्वी पहाडका अधिकांश जिल्लाहरूको निर्वाचन क्षेत्र घटेको छ । भौगोलिक क्षेत्रलाई भन्दा जनसंख्यालाई आधार मनेर क्षेत्र निर्धारण गरिएका कारण जनसंख्या कम भएको जिल्लाका क्षेत्र घटेका हुन् । प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतका ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगालागायतका जिल्लाहरू एक निर्वाचन भएका छन् ।
ताप्लेजुङ ः योगेश भट्टराईको चर्चा
एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङमा आगामी मंसिरको पहिलो साता हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व पार्टी सभापति केशवप्रसाद दाहाल, पार्टी सभापति लिला बोखिम, महासमिति सदस्य प्रतापप्रकाश हाङ्गाम र पूर्व जिल्ला सभापति दिपेन्द्रकुमार सेन्दाङले चर्चा चलाएका छन् । यद्यपी यी नेताहरूको रोजाइ भने प्रतिधिसभाभन्दा प्रदेशसभा नै छ । पहिलो पुस्ताका कांग्रेस नेता सूर्यमान गुरुङ शारीरीक रूपमा अशक्त भएपछि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई उम्मेदवार बन्ने बाटो खुलेको हो । स्थानीय तह निर्वाचनमा विगतका निर्वाचनभन्दा कांग्रेसको मत बढेकाले कडा मिहिनेत गर्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जित्न सकिने आंकलन नेपाली कांग्रेसको छ । प्रदेशसभा ‘क’ मा याङवरक गाउँपालिक, फुङ्लिङ नपा, सेदिङवा, सिरिजंग्घा र फताङलुंग गापाको वडा नम्बर ३ छन् भने ‘ख’ मा आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका मैवाखोला, मिरिङदेन, मिक्वाखोला र फताङलुङ गाउँपालिकाको १, २, ४, ५, ६ र ७ वडा छन् ।
एमालेले आफ्नो संगठनको साख कायम राख्न प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने चर्चा चलाएको छ । काठमाडांै–६ बाट पराजित भएका भट्टराईको पुख्र्यौली थालो ताप्लेजुङ हो । तर उनी एमालेका निर्विकल्प उम्मेदवार भने होइनन् । एमालेका तिलकुमार मेन्याङवो, डम्बरध्वज तुम्वाहाम्फे र भुपेन्द्र थेवे पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको एमालेका एक जिल्ला नेताले तरुणलाई बताए । माओवादीले सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका वाङ्दी शेर्पालाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ भने लिम्बूवानका कीर्तिमान मादेन उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् ।
प्रदेशसभाका लागि १ नम्बरबाट नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति राम लिम्बू, महासमिति सदस्य तथा पूर्व पार्टी सचिव गजेन्द्र तुम्याङा, पार्टी सचिव मंगल मेन्याङ्वो र शिक्षक संघका पूर्वसभापति कृष्ण बस्नेतले चर्चा चलाएका छन् । प्रदेश १ मा एमालेको भन्दा कांग्रेसको जनाधार बलियो भएकाले टिकट लिन ठूलै कसरत हुने जिल्ला नेताहरू बताउँछन् । सिनियर नेतहरूले मुख नखोले पनि प्रतिनिधिसभाको टिकटमा भन्दा यस प्रदेशको टिकटमा आँखा लगाएका छन् ।
एमालेका पार्टी सभापति बलबहादुर सम्वाहाम्फे, सन्तोष खतिवडा र भूपेन्द्र थापामध्ये एक उम्मेदवार बन्ने निश्चित जस्तै छ । माओवादीका मुकेश मेन्याङ्वो र खिलप्रसाद बुढाक्षेत्रीले उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलाएका छन् । प्रदेशसभामा २ नम्बरबाट नेपाली कांग्रेसका खगेनसिंह हाङ्गाम, तेन्जिङ पालुङ, राजकुमार थोप्रले उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेशको मुख्यमन्त्री सुनिश्चित भए योगेश भट्टराई नै यस प्रदेशसभामा चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । एमालेका गोपाल थोप्रा, राम सुवेदी र पूर्वसांसद ओम ओझा, लक्ष्मीप्रसाद याक्सो पनि प्रदेशसभामा अकांक्षी छन् । माओवादीले टंक आङबुहाङलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्ने हो भने विगतमा भन्दा नेपाली कांग्रेसको मत निकै बढेको छ ।
भोजपुर : कांग्रेस नेताकै चर्चा
भोजपुरका कांग्रेस नेताहरूले स्थापनाकालदेखि नै केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आएका छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा सफल भएका नेताहरूलाई जिल्लाको राजनीतिमा भने आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्घातले निरीह बनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसको भन्दा एमालेको मत करिब तीन हजार बढी छ । प्रदेशसभा १ मा एमालेको भन्दा कांग्रेसको मत बढी छ भने प्रदेशसभा २ मा कांग्रेस एमालेभन्दा पछि छ ।
नेपाली कांग्रेस भोजपुरले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ । मुलुकमै लोकप्रिय छवि बनाएका विकासवादी नेता कार्कीलाई उम्मेदवार बनाउँदा चुनाव जित्न सहज हुने एक जिल्ला नेताले बताए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पूर्व पार्टी सभापति बालकृष्ण थापा र युवा नेता उमेशजंग रायमाझीले आफ्नो उम्मेदवारीको चर्चा चलाएका छन् ।
एमालेले सांसद शेरधन राई, जयन्ती राई र राजेन्द्र राईमध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । माओवादीका सुधन किराती र संघीय समाजवादीका अजम्बर काम्वाङले उम्मदवारी दिने बताइन्छ ।
प्रदेशसभामा १ नम्बरबाट नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा पूर्वपार्टी सचिव हेमन्त मुकारुङ, पार्टी सभापति नन्दमणि राई, महासमिति सदस्य तथा तरुण दलका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तमकुमार चापागाई, महासमिति सदस्य विनोद बान्तवा, धर्मराज राईलगायतका नेताहरूले आकांक्षा देखाएका छन् । एमालेका नेता हरिबहादुर राईको प्रदेशसभामा चुनाव लड्ने चर्चा छ । माओवादीमा अरुण सुन्दास, राजेश खतिवडा, कुमार राई आकांक्षी छन् । संघीय समाजवादी फोरमले गोपालकुमार राईलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ । भोजपुर १ मा साल्पासिलिछो, ट्याम्केमैयुम गापाका १, २, ३, ४ र ५ नम्बर, षडानन्द नपा, भोजपुर नपा का १, २, ३, ४, ५ र १० नम्बर वडा, अरुण गापा र पौवादुङ्मा गापाको १ र २ नम्बर वडा पर्दछ ।
प्रदेशसभा २ को नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य गोविन्दबहादुर कार्की, युवा नेतृ माया राई र क्षेत्रीय सभापति उदिप राईले चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् । एमालेका भरत तामाङको चर्चा सबैभन्दा बढी छ । राम्रो सामाजिक छवि बनाएका स्वतन्त्र व्यक्ति ईश्वरमान राईलाई चुनाव लडाउने एमालेको रणनीति रहेको एक जिल्ला नेताले बताए । माओवादी नेता गोपाल किरातीले प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री बन्न सुरक्षित ठाउँको रूपमा पहिचान गरेका छन्, स्रोतले बतायो । क्षेत्र २ मा आमचोक, हतुवागढी, रामप्रसाद राई गाउँपालिका, पौवादुम्वा गापाको ३, ४, ५ र ६ वडा, भोजपुर नपाका ६, ७, ८, ९, ११ र १२ वडा र टुयाम्केमैयुम गापाका ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा रहेका छन् ।
संखुवासभा, एक हजार मतले कांग्रेस अगाडि
दोस्रो संविधासभा निर्वाचनमा संखुवासभाका दुवै क्षेत्रबाट जित हात परेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्न रणनीति तयार गरिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा जिल्लामा एक हजारभन्दा बढी मतले कांग्रेस अघि छ । प्रदेशसभाका दुवै क्षेत्रमा कांग्रेसको डोमिनेसनमा एमाले परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वपार्टी सभापति तथा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री तारामान गुरुङ, कांग्रेस राजनीतिमा लामो समयदेखि त्याग गर्दै आएका युवा नेता थलकुमार लिंखा, पूर्वसांसद टंकप्रसाद राईले आकांक्षा राखेका छन् । यसैगरी, पूर्वसांसद वीना पौडेल, पूर्वसंसद पासाङ शेर्पा, महासमिति सदस्य महेश थपलिया, पूर्वपार्टी सभापति जनक थापा, पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्कालगायतले आ–आफूले टिकट पाउने चर्चा चलाएका छन् । एमालेले राजेन्द्र गौतम र परशुराममेघी गुरुङमध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउने लगभग निश्चित जस्तै छ । माओवादीमा पूर्णप्रसाद राई र बेदमाया भण्डारी आकांक्षी छन् ।
प्रदेशसभाको निर्वाचनमा क्षेत्र १ बाट नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति दिपनकुमार श्रेष्ठ, महासमिति सदस्य तथा पूर्व पार्टी सभापति मुक्ति राई, महिला नेतृ उषा कार्की, पूर्वक्षेत्रीय सभापति हरिश्वर थापामगर, महिला नेतृ चित्ररेखा अधिकारीलागायतले दाबी गरेका छन् । यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेको संगठन निकै मजबुत छ । यसै क्षेत्रबाट २०५६ सालमा टंकप्रसाद राई र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तरामान गुरुङ निर्वाचित भएका हुन् । एमालेले जिल्ला अध्यक्ष हेमराज घिमिरेलाई चुनावी मैदानमा उतार्ने लगभग निश्चित छ । १ मा भोटखोला, मकालु, चिचिला, सभापोखरी, सिलिचोङ् र खाँदवारी नगरपालिका पर्दछन् ।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति दीपक लिम्बू, महासमिति सदस्य शंकरमान कँडेल, महाधिवेशन प्रतिनिधि कुमारबाबु अधिकारी, महासमिति सदस्य शंकरमान कँडेल, महाधिवेशन प्रतिनिधि पशी शेर्पालगायतले आफ्नो उम्मेदवारीको चर्चा चलाएका छन् । पूर्वजिविस सभापति तुलसी न्यौपाने र पूर्वपार्टी अध्यक्ष उमेशकुमार डाँगीमध्ये एकलाई एमालेले अघि सार्ने जिल्ला नेताहरूको अनुमान छ । माओवादीले लाखमान तामाङलाई उम्मेदवार बनाउने बताइन्छ । क्षेत्र नम्बर २ मा चैनपुर नपा, धर्मदेवी नपा, मादी नपा र पाँचखपन नपा पर्दछन् ।
पाँचथर : प्रदेशमा को को ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गएपछि पाँचथरमा उम्मेदवारहरूको चर्चा सुरु भएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको पाँचथरमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद भीष्मराज आङ्देम्बे र पार्टी सभापति नरेन्द्र केरुङ प्रतिनिधिसभाका सम्भावित उम्मेदवार भएको कांग्रेस कार्यकर्ताहरू बताउँछन् । एमालेले पूर्वसांसद डम्बरसिंह सम्बाहाम्फे, बसन्तकुमार नेम्वाङ र गणेशकुमार काम्वाङमध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउने प्रायः निश्चित जस्तै छ । माओवादीले पूर्वमन्त्री श्रीप्रसाद जबेगुलाई उम्मेदवार बनाउँदै छ ।
प्रदेशसभाका लागि क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति समरबहादुर अधिकारी, पार्टी सचिव रूपनारायण जबेगु, महासमिति सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडा, पूर्वमहासमिति सदस्य सुरेन्द्र तिम्सिना उम्मेदवार बन्ने दौडमा छन् । एमालेका वीरेन्द्र योङहाङ, उपेन्द्र दंगाल र टिकेन्द्र चौलागाई आकांक्षी छन् । माओवादीले महेन्द्रविक्रम नेम्वाङ अघि सार्ने बुझिन्छ । यस क्षेत्रमा याङ्वरक, हिलिहाङ, फालेलुंङ गाउँपालिका र फिदिम नपाका १, २, ३, ४, ७, ८, १०, ११, १२, १३ र १४ वडा छन् ।
प्रदेशसभाका लागि नेपाली कांग्रेसले क्षेत्र नम्बर २ मा महासमिति सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद दाहाल र शिक्षक संघका जिल्ला अध्यक्ष वीरेन्द्र खड्कामध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउने लगभग निश्चित छ । एमालेले गंगा चेम्जोङ, प्रेमप्रसाद रिजाल, टीकाराम चेम्जोङ चुनावी मैदानमा देखिएका छन् । माओवादीका अम्मरसिंह थापा पनि चुनावी दौडमा छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा फिदिम नपाका ५, ६ र ९ वडा, फाल्गुनान्द, कुम्मायक, तुम्वेवा र मिक्लाजुङ गाउँपालिका रहेका छन् ।
धनकुटा : कुन दलबाट को ?
स्थानीय निर्वाचनमा धनकुटाका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा पराजित भएको नेपाली कांग्रेसले दोस्रो संविधिनसभाको भन्दा करिब १० हजार मत स्थानीय निर्वाचनमा बढाएको छ । मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले पूर्वपार्टी सभापति तथा सांसद मनोहरनारायण श्रेष्ठ, लीला सुब्बा, महासमिति सदस्य अजितनारायणसिंह थापा र आनन्दसन्तोषी राईमध्ये एकलाई चुनावी मैदानमा ओराल्ने छ । एमालेले राजेन्द्र राई, राप्रपाले सुनिल थापा र माओवादीले हेमराज भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउने चर्चा चलाएको छ । संघीय समाजवादी फोरमले रकम चेम्जोम र अर्जुन थापामध्ये एकलाई अघि सार्ने बताइन्छ । धनकुटामा राप्रपालाई प्रदेशसभा दिने गरी कांग्रेसले तालमेल गर्ने रणनीति बनाएको छ । सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापा भने कांग्रेसका लागि प्रदेशसभा छाड्न तयार देखिएका छन् ।
प्रदेशसभाका लागि १ नम्बर क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका कोमट फागो, नवीनकिशोर शाक्य र विजयसन्तोषी राईमध्ये जसलाई उठाए पनि जित्न सक्छन् । एमालेले निरन राई, दुर्गा लिंखा, टीकाराम राईमध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउने चर्चा चलाएको छ । माओवादीका ऋषिराम ढुंगाना, जुली श्रेष्ठ आकांक्षी छन् । राप्रपाले धर्मध्वज राईलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ । यस क्षेत्रमा चौीसे, साँघुरीगढी, खाल्सा छिन्ताङ सहिदभूमि गापाका १, २, ३, ६ र ७ वडा र धनकुटा नपाका १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १० नम्बर वडा पर्दछन् ।
प्रदेशसभाका लागि २ नम्बर क्षेत्रबाट सांसद अञ्जना ताम्ली, रमेश पौडेल र धिरेन्द्र मिश्रमध्ये एकलाई नेपाली कांग्रेसले अघि सार्ने बुझिन्छ । एमालेका इन्द्रमणि पराजुली, धर्मराज पौडेल र सुरेन पौडेलमध्ये एकले टिकट पाउने निश्चित छ । राप्रपाका कुमार थापा पनि सम्भावित उम्मेदवार हुन् । क्षेत्र नम्बर २ मा महालक्ष्मी नपा, पाख्रीवास नपा, छथरजोरपाटी गापा, धनकुटा वडा नम्बर २ र खाल्सा छिन्ताङ सहिदभूमिको ४ र ५ वडा पर्दछ ।
खोटाङ : एमालेभन्दा कांग्रेस तीन हजार मतले पछाडि
पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले पूर्वमन्त्री सर्वधन राई, शिवकुमार बस्नेत र सांसद सरस्वती बजिमयमध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । एमालेले सांसद विशाल भट्टराई र पूर्वसांसद उषाकला राईमध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउँदै छ । माओवादीका पूर्वसांसद अस्मिता कार्की र राजकुमार राई उम्मेदवारको चर्चामा छन् । यहाँ कांग्रेसका शिवकुमार र विशाल भट्टराईबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ।
प्रदेशसभाका लागि क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति नरेश श्रेष्ठ र पूर्वसभापति सुवास पोख्रेलमध्ये एकले टिकट पाउन सक्छन् । एमालेका राजन राई र सांसद पाँचकर्ण राईमध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउँदा बलियो प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । माओवादीका पूर्वसांसद दुर्गाजयन्ती राई र टंक राई चुनावी मैदानमै छन् । निकै ठूलो भूगोल ओगटेको यो क्षेत्रमा एेंसेलुखर्क, केपीलासगढी गापा र रूपाकोट मझुवागढी नपाका १, २, ३, १०, ११, १२, १३, १४ र १५ वडा तथा लामिडाँडा र हलेसी तुवाचुङ नपा पर्दछन् ।
प्रदेशसभाका लागि २ नम्बर क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व पार्टी सभापति विष्णुकुमार राई, क्षेत्रीय सभापति तीर्थराज भट्टराई र पूर्वसांसद हीरा गुरुङ चर्चामा छन् । एमालेका राम दंगाल, जलशेर राई र माओवादीका देवान राई र ध्रुव बुढाथोकीको चर्चा चलिरहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको आंकडालाई आधार मान्ने हो भने खोटाङमा नेपाली कांग्रेस एमालेभन्दा तीन हजार मतले पछि छ । प्रदेशसभाको क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेस र एमालेको मत हाराहारीमा छ भने २ मा एमाले केही मतले अघि छ । क्षेत्र नम्बर २ मा रूपाकोट मझुवागढी नपाका ४, ५, ६, ७, ८ र ९ वडा, साकेला गापा, दिपु्रङ, खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गापा छन् ।
ओखलढुंगाः कांग्रेसको बलियो जग
नेपाली कांग्रेसको इतिहास बोकेको जिल्ला हो ओखलढुंगा । एमालेको तुलनामा नेपाली कांग्रेसको संगठन निकै बलियो पनि छ । स्थानीय निर्वाचनका तथ्यांक हेर्ने हा भने नेपाली कांग्रेस एमालेभन्दा तीन हजार मतले अघि छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ मा एक गाउँपालिका र दुईमा चारमध्ये तीन गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले जीत हात पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा, पार्टी सभापति प्रदीपकुमार सुनुवार, ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, महासमिति सदस्य मित्रसेन दाहाल, बालकृष्ण दाहाललगायतले आ–आप्mनो चर्चा चलाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा टिकट नपाएका यी नेताहरूमध्यबाटै प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन पहल गर्ने एक जिल्ला नेताले बताए । सांसद खतिवडा नै बलिया उम्मेदवार हुन् । प्रदेशसभाका लागि हुने निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर १ मा खिजिदेम्बा गापा, मेलुङ, चिसंखुगढी गापा र सिद्धिचरण नपाको १० नम्बर वडाबाहेक ११ वटा वडा पनि यसै क्षेत्रमा पर्छ । क्षेत्र नम्बर २ मा लिखु, चम्पादेवी, सुनकोसी, मानेभन्ज्याङ गापा र सिद्धिचरण नपाको १० नम्बर वडा पर्दछ ।
Tarun Khabar0response शुक्रबार,६ आश्विन २०७४ 702 Views